Mari yeKubatsira Varombo Munguva yeCovid-19 Yotsakatitswa neVakuru muHurumende
Amai Mildred Chiri vanotungamira hofisi yekufambiswa kwemari dzehurumende
Ongororo yakaitwa nehofisi inoona nezvekufambiswa kwemari mumapazi ehurumende kana kuti Office of the Auditor-General, inoti kubvira pakatanga kuvharwa nyika nekuda kweCovid-19 gore rapera inoratidza kuti mari yaifanira kubatsira vanotambura nevaya vainge vabatwa neCovid-19 yakabiwa kana kuti haina kushandiswa sezvainge zvakatarisirwa, izvo zvakasiya vanhu ava vachiyaura nenhamo.
Gwaro iri, iro rakaturwa kuparamende svondo rino, rinoti kunyange hazvo hurumende yakaisa parutivi mari yekubatsira vanhu panguva iyo vaikurudzirwa kugara mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19, vakawanda havana kuwana mari iyi nekuda kwechitsotsi nechikiribidi chakaitwa pamabatirwo aiitwa homwe iyi.
Mugwaro ravo Auditor-General, Amai Mildred Chiri, vanoti mari inodarika mamiriyoni makumi masere nemapfumbamwe yafanira kubatsira vemabhizimisi madiki akavharwa nekuda kweCovid-19, mhuri dzinotambura, vakaremara vanorwara nevamwe kubva muna Chivabvu 2020 kusvika muna Zvita 2020 haina zvayakaita zvinoonekwa nekuti hapana humbowo hunoratidza kuti yakapihwa ani, uye imwe yakapihwa kuvanhu vasingazivikanwe uyewo vamwe vaiwana mari iyi kaviri kaviri.
Amai Chiri vanotiwo bazi revechidiki nemutambo rakapawo vechidiki, vatambi, vaimbi nevamwe vainge vabatwa neCovid-19 mari yekubatsirikana vasingatevedze zvinodiwa kana kuti pasina humbowo hunoratidza zvechokwadi vanhu ava vaiva vaimbi kana vatambi.
Vanotiwo munzvimbo dzaichengeterwa vanhu vane Covid-19 kana kuti maQuarantine Centre, zvinhu zvaitengwa pasingatevedzwe mutemo, uye mune dzimwe nguva vashandi havana kupihwa mari dzavo dzekubatsirikana izvo zvaiita kuti vawore moyo.
Zvimwewo zvisina kufadza Amai Chiri ndezvekuti basa raisa famba nemazvo kunyange hazvo hurumende yainge yaisa parutivi mari yekugadzirisa nzvimbo dzekuchengetera vanhu vaive neCovid-19.
Semuenzaniso, vanoti kusvika musi 12 Zvita 2020 hurumende yainge yabhadhara mamiriyoni zana nemakumi masere emadhora emuno ($180 million) ekugadzira maIsolation Centre makumi matatu nemaviri asi panguva iyi painge pagadzirwa mapfumbamwe chete.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaMarvelous Khumalo, vaudza Studio 7 kuti vano shushikana zvikuru nezvabuda mugwaro raAuditor General vakati vese vakaba mari iyi vanofanira kudomwa nemazita.
Mukuru anoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, Itai Ruben Mbofana, vati nyaya yekuti mutauriri weparamende, Advocate Jacob Mudenda, ndivo vakatozotura gwaro iri kudare mushure mekunge mapazi ehurumende atadza kuita izvi anoratidza kuti pane huwori hunotyisa huri kuitika panyaya yeCovid-19.
Vati chinosuwisa ndechekuti vanhu vari kutora mupoto yeCovid-19 vakuru vakuru muhurumende.
VaMbofana vanoti vanhu vanoda kuona mbavha dzichienda kumajeri kwete kungodzidzinga mabasa chete.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvehutano, Dr John Mangwiro, vaudza Studio 7 kuti nyaya dzese dziri mugwaro raAuditor-General hadzinei nebazi ravo vakati titaure nebazi rezvemagariro evanhu.
Studio 7 yatumira mubvunzo kugurukota rezvemagariro evanhu Muzvinafundo Paul Mavima avo vati dzimwe mari dzisina kufambiswa zvakanaka dzakatodzorwa sezvo painge pasina kujeka kuti dzaifanira kupihwa ani. Vati vachiri kuferefetawo zvimwe zviri mugwaro iri.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu chetedzwa kwevanhu zvakanaka, Prof Paul Mavhima sezvo vange vasiri kudair nhare mbozha yavo.
Kusvika musi 2 Mbudzi 2020 bazi rezvemari range rapa mapazi ehurumende nemakambani ayo akaita seDistrict Development Fund mari inodarika 1.9 billion yemaRTGs yekubatsira kusimudzira zvipatara, kuvaka maQuarantine
nemaIsolation Centres, kuchera zvibhorani nemamwe mabasa ekubatsira paCovid-19.
Veruzhinji munyika vanochema vachiti havana rubatsiro rwavari kuwana vachiti Covid-19 yatovasiya vave varombo zvakanyanya.
World Bank yakaburitswa gwaro masvondo mashomana apfuura ichiti Covid-19 yasiva vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana masere vave varombo zvakanyanya muZimbabwe zvekutoshaya chekudya muswere wose.